बच्चालाई के उपहार दिने ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
By नेपाली कान्छा on 7:25 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
बालबालिकालाई खुसी बनाउन हामी उपहार दिने गर्छौं । जब उनीहरुले परीक्षामा राम्रो अंक हासिल गर्छ, तब हामी उपहार दिन्छौं । जब उनीहरुको जन्मदिन आउँछ, तब हामी उपहार दिन्छौं । जब उनीहरुले कुनै राम्रो काम गर्छ, तब हामी उपहार दिन्छौं ।
खासमा उपहार भनेको हौसला हो । प्रेरणा हो । उपहार दिएपछि उनीहरु खुसी हुन्छन् । साथसाथै यसले उनीहरुलाई हौसला पनि दिन्छ । त्यसैले राम्रो काम गरे बापत उपहार दिने गरिन्छ । जन्मदिन लगायतका अवसरमा उनीहरुलाई खुसी तुल्याउन उपहार दिइन्छ ।
बालबालिकालाई कस्तो उपहार दिने ? अक्सर अभिभावक अलमलमा हुन्छन् । कहिले काहीँ अरुको बालबच्चालाई उपहार खरिद गर्नुपर्दा पनि हामी द्विविधामा हुन्छौं, आखिर कस्तो उपहार उपयुक्त होला ?
उपहार छनौंटः दुई गल्ती
उपहार छनौट गर्दा हामीले गर्ने एउटै गल्ती हो, उपहार हामी आफ्नो रुची र इच्छा अनुसार खरिद गर्छौं । अर्थात हामी आफुलाई जे मन पर्छ, त्यही कुरा उपहारको रुपमा दिने गर्छौं ।
उपहार खरिद गरिरहँदा हाम्रो मनमा दुई किसिमको विचार आउँछ ।
एउटा विचार, अलि उपयोगी र काम लाग्ने किसिमको उपहार खरिद गरौं ।
अर्को विचार, यसो घरमा सजाउन मिल्ने किसिमको टिकाउयुक्त उपहार खरिद गरौं ।
यही विचारले हामी बच्चालाई पुस्तक उपहार दिन्छौं, पेन्टिङका सामाग्री उपहारमा दिन्छौं । यसैगरी घडी, गुडिया वा अरु किसिमको सजावटको सामाग्री उपहार दिन्छौं । यी उपहारमध्ये कुनै हामीलाई ज्ञानवर्द्धक लाग्छ भने कुनै सजाउन मिल्ने किसिमको ।
कस्तो उपहार उपयुक्त ?
बालबालिकालाई उपहार खरिद गर्नुअघि प्रश्न गरौं कि उनीहरुलाई किन उपहार प्रदान गरिदैछ ? के उनीहरुले कुनै प्रगति गरेर देखाएका छन् ?
जस्तो परीक्षामा राम्रो अंक हासिल गरेको छ । कुनै प्रतियोगिताबाट पदक जितेर आएका छन् । कविता वा कुनै रचना पत्रपत्रिकामा प्रकासित गरेका छन् । कुनै दुःखी, गरिबलाई मद्दत गरेर फुरुंग भएका छन् ।
यदि त्यसो हो भने हामी उनीहरुलाई अरु हौसला दिन चाहन्छौं । उनले गरेको काममा स्यावासी दिन चाहन्छौं । यसका लागि हामीले उनीहरुलाई प्रेरणा मिल्ने किसिमको उपहार दिन सक्छौं । जस्तो उनीहरुले के कुरामा प्रगति गरेका हुन् ? संगीत प्रतियोगितामा पदक जितेका हुन् भने उनीहरुलाई कुनै वाद्ययन्त्र वा संगीत सम्बन्धी कुनै सामाग्री बढी उपयोगी हुन्छ ।
यदि कसैलाई उनीहरुले सहयोग गरेका छन् । हामी उनीहरुलाई उपहार दिएर स्याबासी दिन चाहन्छौं भने प्रेरक व्यक्तिहरुको पुस्तक उपहार दिन सक्छौं ।
यस्तो उपहार, जसले उनीहरुको काम, उन्नती र प्रयासलाई थप हौसला मिल्न सकोस् ।
पुस्तक ठिक होला ?
हामीले आफ्नो रुची अनुसार होइन, बच्चाको रुची अनुसार उपहार दिनु राम्रो हो । उपहार पुस्तक हुँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । तर, एकछिन खेलाएर नष्ट हुने सामाग्रीको तुलनामा पुस्तक धेरै राम्रो हो । पुस्तक पनि यस्तो दिनुपर्छ कि, जुन उपयोगी र रोचक हुनुपर्छ । घरमा सजाएर राख्नका लागि भन्दा पनि उनीहरुले त्यसबाट केही सिकेर, बुझेर आफ्नो जीवनमा उपयोग गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
बालबालिकालाई लक्षित गरेर प्रकासित गरिएको पुस्तक नै उनीहरुको लागि बढी उपयोगी हुन्छ । त्यस्ता पुस्तकबाट मनोरञ्जनसँगै ज्ञान पनि आर्जन गर्छन् । त्यस्तै कतिपय पुस्तक चाहि निकै जीवनोपयोगी हुन्छन् । अहिले उनीहरुले नबुझे पनि पछि पढ्न सक्छन् । त्यसलाई उनीहरुले अहिले संग्रह गरेर राख्न सक्छन् । विश्व चर्चित एवं दुर्लभ पुस्तक पनि उपहारमा दिन सकिन्छ ।
पुस्तक उपहार पाएपछि उनीहरुले खोल्छन्, हेर्छन् । पुस्तकप्रतिको लगाव बढ्छ । पठन संस्कृतिको विकास हुन्छ ।
यद्यपी धेरै बौद्धिक बनाउने चक्करमा पुस्तककै थुप्रो मात्र लगाउनु हुँदैन ।
फूल वा विरुवा
खासगरी जन्मदिनको उपहारमा उनीहरुलाई फूल वा अन्य वनस्पतिको विरुवा पनि उपहारमा दिने चलन बसाउनुपर्छ ।
कतिपय वनस्पति, जो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता वनस्पति घरमै रोप्न सकिने भए अरु राम्रो । जब उनीहरुलाई वनस्पति वा फूलको विरुवा उपहार दिन्छौं, त्यसलाई उनीहरुले नै रोप्नुपर्छ । अर्थात रोप्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसबाट उनीहरुले पर्यावरणको रक्षा गर्नेदेखि प्रकृतिसँग नजिक हुनुपर्छ भन्ने गुणको विकास गर्छन् ।
उनीहरुले रोपेको वोट विरुवा जति झांगिदै र सपि्रदै जान्छ, उत्तिनै उनीहरुमा खुसी एवं उमंग पनि बढ्दै जान्छ । यसले एउटा संस्कारकै रुप लिन्छ ।
उपहार खरिद गर्दा मूख्य त बालबालिकाको रुचीलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । उनीहरु के कुरामा रमाउँछन्, कस्तो खेलौना चाहन्छन् ? त्यही अनुसार उपहार खरिद गरिदिनु राम्रो हुन्छ ।
यस्तो उपहार, जसलाई उनीहरुले भरपुर प्रयोग गर्न सकोस् । एकछिनमै रहर पुग्ने वा थन्को लगाउने किसिमको, सजाउने मात्र भन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।